စိတ်ကျရောဂါသည်အ Non-ဆေးဝါးကုသမှုအတွက်အသစ်မှတ်တိုင် - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “စိတ်ကျရောဂါသည်အ Non-ဆေးဝါးကုသမှုအတွက်အသစ်မှတ်တိုင်” နစ်ခ် Davis ကကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 18 မေလပေါ်များအတွက် 2015 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါအဖြစ်စိတ်ဓါတ်များမမှန်ခံစားနေရသူမှကြီးကျယ်များမှာ, ကုသရန်နှင့်အကျယ်အကုန်အကျ. စိတ်ကျရောဂါများဆုံးပြင်းထန်ပုံစံ, မကြာခဏလက်တွေ့စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါဟုချေါသ (MDD), သတ်သေ၏လူတစ်ဦး၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေခြင်းနှင့်လူတစ်ဦး၏မသန်စွမ်း-ချိန်ညှိဘဝကိုနှစ်သိသိသာသာအထောက်အကူပြု (Dali), incapacity ၏အကောင့်ကာလသို့ယူပြီးအသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုတစ်ဦးအတိုင်းအရှည်. အဆိုပါ MDD ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး အများဆုံးနိုင်ငံများအတွက်ကြီးမားသည်, လူတစ်ဦးဆေးရုံတစ်နေရန်လိုအပ်သည်အထူးသဖြင့်လာသောအခါ. ဤအအချက်များအတူတကွချပြီး, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ကျရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်.
စိတ်ကျရောဂါမမှန်များ၏ယန္တရားများကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်, ထိုသို့မျှတစ်ခုတည်းအကြောင်းမရှိရှိကွောငျးဖွယ်ရှိပုံရသည်. အာရုံခံအကြားအချက်ပြသယ်ဆောင်သောဓာတုပစ္စည်းများ - အများစုမှာခေတ်မီကုထုံး neurotransmitters ပစ်မှတ်ထားကြောင်းမူးယစ်ဆေးကိုသုံးပါ. ဥပမာအားဖြင့်, SSRIs အဖြစ်လူသိများမူးယစ်ဆေးအတန်း, သို့မဟုတ်ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitors, တစ်ဦးအာရုံခံဆဲလျသဖြင့် reabsorbed ခံရထံမှ neurotransmitter serotonin တားဆီး; ဒီကပို serotonin အာရုံကြောဆဲလ်များအကြားလှည့်ပတ်ဆေးကြောဖို့မရရှိနိုင်ကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်, နှင့်ဧရိယာကို MDD အတွက်ထိခိုက်သောဦးနှောက်ကွန်ရက်မှာဆဲလ်တွေကိုသက်ဝင်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိသည်.
သို့သော် SSRIs နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ် pharmacological '' အခမဲ့နေ့လည်စာ '' မဟုတျပါ. စိတ်ကျရောဂါများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုများစွာသောလူအဘို့အထိရောက်မှုရှိပါတယ်, အကြောင်းမရှိဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ, နှင့်အချိန်ကိုကျော်သူတို့ရဲ့ကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါ. ဤအအကြောင်းရင်းများများအတွက်, များစွာသောသုတေသီများဒီပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားကြောင်း MDD များအတွက်အစားထိုးကုသမှုကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်, နှင့်ပိုပြီးထိရောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်မနှစ်မြို့ဖွယ်ရှိပါတယ်. တဦးတည်းအလားအလာကုသမှုဦးနှောက်ရဲ့ခံစားချက်ဆားကစ်ပစ်မှတ်ထားဖို့ခေါင်းကိုကျော်သံလိုက်စွမ်းအင်ပဲမျိုးစုံ၏အသုံးပြုမှုကိုကပါဝင်ပတ်သက်. ဒီနည်းပညာ, ခေါ်တော်မူ transcranial သံလိုက်ဆွ (TMS), အလားအလာဆေးဝါးကုသမှု၏ပြဿနာများကိုအချို့ကိုဖြေရှင်းစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နေဆဲကအလုပ်လုပ်တယ်အတိအကျဘယ်လောက်မသိရပါဘူး, သို့မဟုတ်ပါက MDD ကုသ၌ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုဘယ်လိုထိရောက်.
ဤအနက်နဲသောအရာအချို့သည်သို့သော်အဖြေတစ်ခုနီးကပ်စေခြင်းငှါ, အတူ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကရဲ့သတင်း အနောက်ဝေလနယ်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ MDD ၏ device ကို-based ကုသမှုများအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံဈေးကွက်ထဲဝငျဖို့အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့်ခွင့်ပြုချက်ပေးသနားခဲ့. အဆိုပါ Magstim ကုမ္ပဏီ၏ Rapid ၏ခွင့်ပြုချက်2 stimulator ကိုဆွသည်အခြားကုထုံးမှတုန့်ပြန်မရကြသူ MDD ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူခံစားနေရသူတစ်ဦးဆေးကုသမှု option ကိုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ဆိုလိုတယ်- သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-based ကုသ. Magstim ၏ထုတ်ကုန်ရှည်လျားသောဦးနှောက် function ကိုစုံစမ်းခြင်းနှင့် modulate မှတက္ကသိုလ်များနှင့်သုတေသနစင်တာများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြ, နှင့်လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းကိုဒီ devices တွေကိုအတည်ပြုချက် Translational မှ neuroscience အတွက်အရေးပါတဲ့မှတ်တိုင်ခြေတစ်လှမ်း – ဆေးခန်းသို့ပညာရေးဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်ယူပြီး၏စိတ်ကူး.
TMS ဦးခေါင်းခွံကိုဖြတ်ပြီးသံလိုက်စွမ်းအင်ပဲမျိုးစုံပို့ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်ဖြစ်တယ်. ဤရွေ့ကားသံလိုက်စက်ကွင်းန်းကျင်တဦးတည်းစတုရန်းစင်တီမီတာ၏ဦးနှောက်သေးသေးပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများအတွက်စီးဆင်းရန်လျှပ်စစ်ရေစီးကြောင်းသွေးဆောင်, အလှည့်အတွက်ဧရိယာအတွင်းရှိအာရုံခံမျက်နှာပြင်ကိုသက်ဝင်စေဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ရာ – ဤအဖြစ်ရပ်များတစ်စက္ကန့်၏အပိုငျးအကျော်ရာအရပ်ကိုယူ. ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ဤအသံလိုက်ပဲမျိုးစုံရထားထွက်ခြားပိုမိုတာရှည်ခံသက်ရောက်မှုမှဦးဆောင်, အဆိုပါဆွပြီးနောက်တစ်နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုများအတွက်ရေရှည်တည်တံ့ – ဒီထပ်တလဲလဲ TMS အဖြစ်လူသိများသည်, သို့မဟုတ် rTMS. rTMS ၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲအစည်းအဝေးများ, ရက်ပေါင်းများစွာနေ့တိုင်းပေးထား, လပေါင်းအတော်ကြာအောင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းဖို့ဦးနှောက်ရဲ့ plasticity exploit. ဒါဟာအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ပွနျလညျဖှဲ့စညျးဖို့လမ်းပေးသည် (ဘယ်တော့မှ '' rewire '') သေးငယ်တဲ့ဦးနှောက်ဆားကစ်.
MDD များအတွက် rTMS ကုသ prefrontal cortex ပစ်မှတ်ထား, များသောအားဖြင့်အနည်းငယ်စင်တီမီတာလက်ဝဲမျက်စိထောင့်အထက်တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးအတွက်, အဆိုပါ dorsolateral prefrontal cortex ကိုခေါ် (သို့မဟုတ် DLPFC). ဒီဧရိယာအတွင်းရှိဆဲလ်များကိုဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးပရောဂျက်တစ်ခုကိုကွန်ရက်များ ချိတ်ဆက်., နှင့် rTMS ဝေးကွာသောဦးနှောက်ဒေသများအပေါ်သက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဟန့်တားထားပါတယ်နှစ်ဦးစလုံး. ဤအအချက်အချာနှင့်ကွန်ရက်များအပြည့်အဝအတိုင်းအတာညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်က prefrontal cortex လွှတ်ပေးများ၏လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်သည့် midbrain ၏ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦများအတွက်နက်ရှိုင်းသော neurotransmitters ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံရသည်, အဆိုပါအထူးသဖြင့် caudate နျူကလိယ. တစ်ပြန်တစ်လှည့်, ဤအဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံတွန်းအားများနှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိ. ဒါကြောင့်သွယ်ဝိုက်သောဤဒေသများလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်, rTMS တချို့လူတွေအတွက် MDD ၏အနိမ့်စိတ်ဓါတ်များနှင့် listlessness ပြင်ပေးဟန်.
စိတ်ကျရောဂါကုသအနာဂတ်မှာ rTMS Is? ကုသမှုဆက်ဆက်အလားအလာကြည့်, တိုးမြှင့်ငွေလွှဲနှုန်းထားများနှင့်ထင်ရသောအနည်းငယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်အတူ. baseline စိတ်ကျရောဂါရမှတ်များဖြစ်နိုင်သည် တတိယအထိလျှော့ချ အချို့သောလေ့လာမှုတွေအရသိရသည်, သည်အခြားလေ့လာမှုများရှိပါသည်ပေမယ့် ပိုပြီးသတိထား. ဒါဟာကုသမှုရှည်သင်တန်းများပုံ, ရေရှည်တည်တံ့ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာ, သာ. ကြီးမြတ်သက်ရောက်မှုရှိ – ဤအချိန်ကျော်ဦးနှောက်အပေါ် rTMS တစ်ခုထို့အပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြံပြု. သို့သော် MDD အတွက် rTMS ၏ယန္တရားများကျော်မသေချာမရေရာနှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူကခက်ခဲတစ်ဦးချင်းစိတ်ရှည်ဘို့ကုသမှု personalize မှရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုဆိုလို. rTMS တွင်ပါဝင်ပတ်သက် parameters တွေကိုအရေအတွက်, ထိုကဲ့သို့သောကယ်လွှတ်ခြင်းငှါပဲမျိုးစုံ၏နံပါတ်အဖြစ်, သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီသွေးခုန်နှုန်းများ၏ပြင်းထန်မှု, ကခက်ခဲတိကျစွာလူနာအတွက်လိုအပ်သောဆေးထိုးသတ်မှတ်စေ. တိကျတှငျလညျးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အတိအကျပစ်မှတ်တည်နေရာ ဆွဘို့အ prefrontal cortex အတွက် – ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဦးနှောက်ခြံ, ပင်တစ်စင်တီမီတာခြင်းအားဖြင့် DLPFC ပျောက်ဆုံးတဲ့ '' တုံ့ပြန် 'သို့မဟုတ်တစ်ဦး' 'Non-တုံ့ပြန်' 'ဖြစ်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြားခြားနားချက်ကိုဆိုလိုတာနိုင်ပါတယ်, Psychiatry ၏ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးဘာသာစကားမှာ. ထို့အပြင်, rTMS ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှု, ဦးခေါင်းနှိပ်တစ် woodpecker တူခံစားနိုင်သည့်, က ရလဒ်များအရအိပ်ယာအခွအေနေကိုဖန်တီးရန်ခက်ခဲ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်အသုံးပြုရန်.
rTMS လက်ရှိအချိန်တွင်သာ USA တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အတည်ပြု, သာလူနာတစ်ဦးကန့်သတ်အုပ်စု. သို့သော်ထိုသို့ဖွယ်ရှိသည်, with further research into improvements in efficacy and in understanding the mechanisms of the technique, we will see increasing use of rTMS asatreatment for this burdensome disorder. The entry of Magstim into this market offers cliniciansanew avenue for people who may be running out of drug-based options, and marks an important milestone in taking knowledge gained in research and making use of it for the benefit of many.
Dr Nick Davis isalecturer in psychology at Swansea University. You can find him on Twitter ဒီမှာ.
24530	0 အပိုဒ်, Blogposts, Head quarters, neuroscience, စိတ္ပညာ, သိပ္ပံ, သိပ္ပံဘလော့ဂ်ကွန်ယက်ကို
← ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရောင်းချ Sony Xperia Z4 Tablet ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →